Uthobane chagwe angeke ayiqede i-Comrades Marathon yalonyaka | News24
Uthobane chagwe angeke ayiqede i-Comrades Marathon yalonyaka
OWANQOBA umjaho wodumo nokhula ngendlela eyisimanga iNelson Marathon ngo 2014 uThobani Chagwe wokuzalwa eBulwer eNkwezela uthi iComrades Maratho uzoyigijima kodwa angeke ayiqede. Lomgijimi ukuqinise kulelisonto ngesikhathi ebuzwa ngamalungiselo akhe omjaho omkhlu ozobe waminyaka yonke ozobe ugijinywa phakathi kwePietermaritzburg neTheku (Durban). IComrades Marathon yalonyaka izobe isukela eMphithi (Pmburg) ize iyophelela eMdubane (Durban) ngo May 29.
UChagwe wazakhela udumo ngesikhathi edla umhlanganiso kkwiNelson Mandela Marathon (42,2km) okwakungeyesithathu ngamahora amabili namaminithi angamashumi amabili nesikhombisa (2hrs:27 minutes). Emva kokudla umhlanganiso kuningi okwakubhekeke kulomgijimi nokwenza kubukeke sengathi sekumfakele nengcindezi yokuhlala enza kahle kuyoyonke imijaho. Abanye ongoti bezokusubatha baze baqagule ukuthi ngelinye ilanga uChagwe uyoyingenela futhi ayiwine iComrades Marathon.
“Njengamanje ngisekhaya futhi ngiyaziqeqesha kanzima phakathi kweBulwer ne Underberg. IComrades Marathon yona ngizoyingenela kodwa angizimisele ngokuyiqeda. Icebo lami ukuphuma uma ngiqeda u40km ngoba kuzobe kufana nokuthi ngizobe ngiziqeqesha nje. Ongincedisa ngokuziqeqesha noma ngingathi umata wami engijima naye uSlindile Gubese. Ngingathi nje konke kuhamba kahle namalungiselelo angiphathe kahle. Mina umqondo wami ukwiCape Town Marathon ngoba ngifuna ukuyiwina, kwiComrades ngizobe ngiziqeqesha nje futhi ngingabheke lutho kuyo,” kuchaza uChagwe.